भाइरस धेरै म्युटेसन हुँदैमा घातक हुन्छ भन्ने छैन - Nepal Samaj
११ बैशाख, २०७८नेपाल समाजस्वास्थ्य / शिक्षा, विचार
डा. रवीन्द्र पाण्डे।
छिमेकी देश भारतमा संक्रमणले भयाबह स्थिति आएको छ । त्यहाँको संक्रमित र मृतकको संख्या गनेर हामी आत्तिनु हुँदैन । बेड प्याक भए, अक्सिजन सकिन लाग्यो, केटाकेकेटीलाई बचाउन गाह्रो पर्ने भयो, अब के होला ? कतै ब्राजिल र भारतको अवस्था हुने त होइन ? यस्ता कुरा मनमा राखेर त्रास तथा असुरक्षा महशुष नगरौं । भाइरसको हजारौं / लाखौँ पटक म्युटेसन हुनसक्छ । यो भाइरसको स्वभाव हो । धेरै म्युटेसन हुँदैमा घातक हुन्छ भन्ने छैन । कोरोना भाइरस आफै हावामा उडेर हामीलाई संक्रमित गर्दैन । हामीलाई संक्रमित जनावर तथा चराले पनि सार्दैनन् । हामीलाई संक्रमण सार्ने हाम्रै आफन्त, साथीभाइ तथा सहकर्मीले नै हो । आफन्त तथा नजिकका व्यक्तिहरुसंग पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर सुरक्षित हुने हाम्रै हातमा छ ।
सहि तरिकाले मास्क लगाउने, भौतिक दुरी कायम गर्ने, भीडभाडमा नजाने, भीडभाड तथा भोजभतेर नगर्ने, बन्द कोठामा बैठक वा भेटघाट नगर्ने तथा नियमित रुपमा हातको सफाइ गर्ने बानी गर्यौं भने हामीलाई संक्रमण सर्दैन । हामी संक्रमित भएनौं भने हाम्रा परिवारजन सुरक्षित हुन्छन् । सुरक्षित भएपछि अस्पताल, बेड, आइसीयु, अक्सिजन तथा अन्य औषधिको आबश्यकता हुँदैन।
संक्रमणको सांग्लो तोड्न सरकारले दिएका निर्देशन हामीले पालना गर्नु जरुरी हुन्छ | सरकारले पनि जनधनको क्षति रोक्न समयानुसार कडाइ गर्नुपर्दछ । यी दुवै पक्षको संयोगले मात्र महामारी नियन्त्रण हुन्छ । सतर्क बनौं तर त्रस्त नबनौं ।